ရည်းစားကပစ်သွားလို့ အဆိပ်သောက် သေကြောင်းကြံသွားတဲ့ ဆရာဝန်မလေး… ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ် ညီမလေး တို့ရေ – GuGuGarGar
Shwe | May 11, 2020 | Knowledge | No Comments
စာ ဖတ် မပျင်း ပါနဲ့ ….ဖတ်ကြည့်စေ ချင်ပါတယ် ညီမလေး တို့ရေ
ဆင်းရဲတဲ့ လင်မယား ၂ ယောက်မှာ စာတော်တဲ့ သမီးလေး ရှိတယ် ၊ တစ်နေ့ သမီးလေးဟာ အတန်းတင် စာမေးပွဲမှာ ပထမ ရတယ် ။ အဖေဟာ ဝမ်းသာလွန်းလို့ လိုချင်တာ ဝယ်ပေးမယ် ပြောတယ် ။ သမီးလေးဟာ သိပ်လိုချင်ခဲ့ပေမဲ့ အဖေမှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်းသိလို့ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတ်အစား တစ်စုံကို လိုချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် ။
နောက်တစ်နေ့မှာ အဖေဟာ သမီးလေး လိုချင်တဲ့ အဝတ်တစ်စုံ ကို ဝယ်ပေးလိုက်တယ် ၊ သမီးလေးဟာ ဝတ်ကြည့်ပြီး မှန်ရှေ့မှာ ပျော်လို့ ၊ အဖေကလည်း သမီးလေးကို ကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ မျက်ရည်စို့နေရှာတယ် ၊ မပျော်နိုင်သူက အမေပါ ။ ညရောက်တော့ အမေက သူ့ယောက်ျားကို မေးတယ် ၊ပိုက်ဆံ ဘယ်ကရသလဲပေါ့ ? ” ဆေးရုံတစ်ခုမှာ ငါ့သွေး ဖောက်ရောင်းလိုက်တာတဲ့ ”
ဒီလိုနဲ့ သမီး ၁၀ တန်းကို ဂုဏ်ထူး အများကြီး ရပြီးအောင် သွားတယ် ၊ ဆေးတက္ကသိုလ် တက်ဖို့ အဖေ့မှာ ပိုက်ဆံ မရှိမှန်း သိလို့ မပူဆာပါဘူး ၊ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ အဖေက ပိုက်ဆံတွေ ထည့်ထားတဲ့ လွယ်အိတ်ကြီးကို ပြပြီး သမီး မပူနဲ့ ၊ အဖေ့မှ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရှိတယ် ၊ သမီး ဆရာဝန် ဖြစ်တဲ့ထိ လုံလောက်ပါတယ်တဲ့ ။
သမီးလည်း ဝမ်းသာလွန်းလို့ ထ ကနေတယ် ၊ အဖေခမျာလည်း သမီးကို ကြည့်ပြီး ပျော်လွန်းလို့ ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ ၊ မပျော်နိုင်သူက အမေပါ ။ ညကျတော့ အမေက သူ့ယောက်ျားကို မေးတယ် ၊ ဒီလောက်များတဲ့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရလာသလဲပေါ့ ?” တစ်လောက ငါ့ကျောက်ကပ် ၂ ခုထဲက တစ်ခု ကိုရောင်းလိုက်တယ်တဲ့ ”
၆ နှစ်ကြာသွားပြီး ၊ အပျော်ဆုံး နဲ့ ဂုဏ်အယူရဆုံးနေ့ ၊ သမီးလေး ဆေးကျောင်းအောင်သွားပြီး ၊ အိမ်ပြန်လာတော့မယ် ၊ တဲအိမ်လေးကို အကောင်းဆုံးပြင်ထားတယ် ။ အိမ်ရှေ့မှာ မြင်းလှည်းတွေ ရပ်သံ ကြားရတယ် ၊ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး ဝမ်းသာအားရ ပြေးထွက်လာတယ် ၊ ဟုတ်ပါတယ် ၊ သမီးလေး ပြန်လာတာပါ ၊ ဒါပေမဲ့ အသက်ရှင်လျှက် မဟုတ်ပါ ၊ ပိတ်ဖြူအုပ်ထားတဲ့ သမီးလေးရဲ့ ရုပ်အလောင်း ။
လာပို့တဲ့ သူတွေထဲက လူကြီးတစ်ယောက်က ပြောတယ် ၊ သူတို့ သမီးလေးဟာ သူ့ရည်းစား ပစ်သွားလို့မနေ့ညက အဆိပ်သောက် သတ်သေသွားတယ်တဲ့ ။
စဉ်းစားစရာ အတွေးလေး ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ။
” မိမိကို မနှစ်သက်လို့ စွန့်ခွာသွားသူ အတွက် အသက်ပေးသင့်သလား ? မိမိအတွက် အနစ်နာခံခဲ့သူတွေအတွက် အသက်ပေးဖို့ မသင့်ဘူးလား ? ” Credit
စာဖတျ မပငျြးပါနဲ့ ….ဖတျကွညျ့စခေငျြပါတယျ ညီမလေး တို့ရေ
ဆငျးရဲတဲ့ လငျမယား ၂ ယောကျမှာ စာတျောတဲ့ သမီးလေး ရှိတယျ ၊ တဈနေ့ သမီးလေးဟာ အတနျးတငျ စာမေးပှဲမှာ ပထမ ရတယျ ။ အဖဟော ဝမျးသာလှနျးလို့ လိုခငျြတာ ဝယျပေးမယျ ပွောတယျ ။ သမီးလေးဟာ သိပျလိုခငျြခဲ့ပမေဲ့ အဖမှော ပိုကျဆံ မရှိမှနျးသိလို့ မပူဆာခဲ့တဲ့ အဝတျအစား တဈစုံကို လိုခငျြတယျလို့ ပွောလိုကျတယျ ။
နောကျတဈနမှေ့ာ အဖဟော သမီးလေး လိုခငျြတဲ့ အဝတျတဈစုံ ကို ဝယျပေးလိုကျတယျ ၊ သမီးလေးဟာ ဝတျကွညျ့ပွီး မှနျရှမှေ့ာ ပြျောလို့ ၊ အဖကေလညျး သမီးလေးကို ကွညျ့ပွီး ပြျောလှနျးလို့ မကျြရညျစို့နရှောတယျ ၊ မပြျောနိုငျသူက အမပေါ ။ ညရောကျတော့ အမကေ သူ့ယောကျြားကို မေးတယျ ၊ပိုကျဆံ ဘယျကရသလဲပေါ့ ? ” ဆေးရုံတဈခုမှာ ငါ့သှေး ဖောကျရောငျးလိုကျတာတဲ့ ”
ဒီလိုနဲ့ သမီး ၁၀ တနျးကို ဂုဏျထူး အမြားကွီး ရပွီးအောငျ သှားတယျ ၊ ဆေးတက်ကသိုလျ တကျဖို့ အဖမှေ့ာ ပိုကျဆံ မရှိမှနျး သိလို့ မပူဆာပါဘူး ၊ တဈပတျလောကျကွာတော့ အဖကေ ပိုကျဆံတှေ ထညျ့ထားတဲ့ လှယျအိတျကွီးကို ပွပွီး သမီး မပူနဲ့ ၊ အဖမှေ့ ပိုကျဆံတှေ အမြားကွီး ရှိတယျ ၊ သမီး ဆရာဝနျ ဖွဈတဲ့ထိ လုံလောကျပါတယျတဲ့ ။
သမီးလညျး ဝမျးသာလှနျးလို့ ထ ကနတေယျ ၊ အဖခေမြာလညျး သမီးကို ကွညျ့ပွီး ပြျောလှနျးလို့ ပါးပွငျပျေါမှာ မကျြရညျတှနေဲ့ ၊ မပြျောနိုငျသူက အမပေါ ။ ညကတြော့ အမကေ သူ့ယောကျြားကို မေးတယျ ၊ ဒီလောကျမြားတဲ့ ပိုကျဆံ ဘယျလိုရလာသလဲပေါ့ ?” တဈလောက ငါ့ကြောကျကပျ ၂ ခုထဲက တဈခု ကိုရောငျးလိုကျတယျတဲ့ ”
၆ နှဈကွာသှားပွီး ၊ အပြျောဆုံး နဲ့ ဂုဏျအယူရဆုံးနေ့ ၊ သမီးလေး ဆေးကြောငျးအောငျသှားပွီး ၊ အိမျပွနျလာတော့မယျ ၊ တဲအိမျလေးကို အကောငျးဆုံးပွငျထားတယျ ။ အိမျရှမှေ့ာ မွငျးလှညျးတှေ ရပျသံ ကွားရတယျ ၊ လငျမယား နှဈယောကျစလုံး ဝမျးသာအားရ ပွေးထှကျလာတယျ ၊ ဟုတျပါတယျ ၊ သမီးလေး ပွနျလာတာပါ ၊ ဒါပမေဲ့ အသကျရှငျလြှကျ မဟုတျပါ ၊ ပိတျဖွူအုပျထားတဲ့ သမီးလေးရဲ့ ရုပျအလောငျး ။
လာပို့တဲ့ သူတှထေဲက လူကွီးတဈယောကျက ပွောတယျ ၊ သူတို့ သမီးလေးဟာ သူ့ရညျးစား ပဈသှားလို့မနညေ့က အဆိပျသောကျ သတျသသှေားတယျတဲ့ ။
စဉျးစားစရာ အတှေးလေး ပေးလိုကျပါတယျဗြာ ။
” မိမိကို မနှဈသကျလို့ စှနျ့ခှာသှားသူ အတှကျ အသကျပေးသငျ့သလား ? မိမိအတှကျ အနဈနာခံခဲ့သူတှအေတှကျ အသကျပေးဖို့ မသငျ့ဘူးလား ? ” Credit
THE HEALTH BENEFITS OF THE MEDICINAL PLUM
ငွေ တွေ ဒလဟောဝင်မယ့် လာဘ်နိုးဂါထာတော်
အမိုက်စား စတိုင်မျိုးစုံ နဲ့ အမိုက်စားဖက်ရှင်တွေကို ဝတ်ပြကာ အပြင်ထွက်ချင်နေပြီလို့ ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ နန်းဆုရတီစိုး(ရုပ်သံ)
အိမ်ထောင်သက် (၁၆) နှစ်ပြည့်သွားပေမယ့် ဇနီးဖြစ်သူကြည်လဲ့လဲ့ဦး အပေါ် အရင်ကအတိုင်း ရင်ခုန်ပြီး ချစ်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့ ဇာနည်
သူ့ နာမည်နဲ့ အမှတ်တရ Mask လေးတွေကို ချစ်သူခင်သူ ပရိသတ်များဆီ လက်ဆောင်ပို့ပေးမယ့် ရန်အောင်